Kaararka Memory hubkaas ayaa loo isticmaalaa in kaamirooyinka iyo qalab kale si loo hubiyo in xogta la badbaadiyey meel aad u yar oo ka dibna waxaa laga heli karaa si fudud oo ku qanacsan. Si kastaba ha ahaatee iyadoo dhererka waqtiga kaararka ku heli musuqmaasuq iyo sabab la mid ah tan tutorial barnaamijyada ugu fiican inuu ka soo kabsado xogta ka kaararka loo soo qadimayo
Dib u eegista software kabashada card 5 xasuusta Top
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 qalab loo isticmaali karo in arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala marka loo eego soo kabashada xogta:
1. CD qalabeed soo kabashada
Barnaamijku waa mid ka mid ah qalabka ugu horumarsan oo loo hubiyo in xogta la soo kabsaday ku dhowaad nidaam kasta oo file fudayd iyo qanacsanaanta. Barnaamijka waxaa markii hore loogu talagalay nidaamka file baruurtii iyo dhererka waqtiga ayaa la ballaariyay iyo in la horumariyo si ay u taageeraan NTFS iyo habab kale oo la xiriira iyo sidoo files si loo hubiyo in waayo-aragnimo user la wanaajiyey.
• Easy in ay isticmaalaan iyo dayactirka ma loo baahan yahay oo dhan.
• Barnaamijka waa mid aad u yar oo ku size
• Barnaamijka ma u muujiyaan caafimaadka file recoverable
• version ayaa la qaadi karo ayaa la soo saaray
2. Undelete files aan Pro
Ahaanshaha barnaamijkan qalab free badan in ay bixiyaan dadka isticmaala ay. Waxaa la sameeyey ma aha oo kaliya in la soo celiyo xogta la tirtiro, laakiin waxaa sidoo kale kaalinta in goobaha la mid ah sidoo kale. Pro ayaa sidoo kale qaybaha aasaasiga ah waa lacag la'aan oo waxaa la Sidaas daraaddeed talinayaa in ay tagaan la version pro sida waxa uu leeyahay muuqaalada dheeraad ah oo faahfaahsan si ay u helaan wax ay xaq u samaysay.
• Qalab ayaa ah mid aad u fudud in ay isticmaalaan interface
• Heerka shaqeynta iyo soo kabashada guud ahaan waa cabsi.
• Barnaamijku waa in loo isticmaalo ganacsi oo aan ahayn oo kaliya
• version ayaa la qaadi karo waa mid adag in la isticmaalo.
3. Mini Power kabashada xogta qalab
Iyada oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in lagu gundhig qalabka sakhiray xaqiiqdii waa doorashada ugu horrayn waxa weeyi mid ah dhammaan dadka isticmaala kuwaasoo raadinaya qalab free internet-ka. Sidoo kale waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo uu leeyahay heerka wareejinta xogta fiican, waxaana u sabab la mid ah waxa ay taasi la hubiyo in heerka ku qanacsanaanta kama dambaysta ah ee qofka macaamilka ah waxaa la kulmay arrintan la xiriira.
• Qaab-dhismeedka guud ee barnaamijka waa user saaxiibtinimo
• user wuxuu hubin doonaa in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si waafaqsan shuruudaha ku samayn kartaa
• Barnaamijku wuxuu ku xayiran gaar ahaan daaqadaha 8
• Guud ahaan caafimaadka kabashada files aan la soo bandhigay.
Kabashada 4. Tokiwa Data
Barnaamijkan waxa kale wuu ka duwanaa sidii ay hubineysaa in diiwaanka asalka u ah cajaladaha ah waxaa lagu falanqeeyay kahor inta aan ficil la xiriira arrintaas waa la qaatay. Waxaa sidoo kale in la xusay in barnaamijka uu yahay mid si buuxda u si toos ah iyo user in uu sameeyo wax aadan ka hor xogta la soo kabsaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka uu yahay mid aan la rakibay baabuur la mid ah ka halka macluumaadka ay tahay in la soo kabsaday sameeyo.
• Barnaamijku waa mid aad u fudud si loo soo dajiyo iyo qaadataa meel disk yar
• waxtarka guud ee barnaamijka waa laga cabsado
• Barnaamijka kaliya taageeraa madal daaqadaha aan Linux ama Mac.
Kani waa barnaamij waa in ay haystaan, waayo, dadka kuwaas oo u baahan in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo marka kaararka la isu kharribeen. Waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo kaa caawin si loo hubiyo in dib u soo kabashada xogta ma aha heshiis weyn oo dhan. Sida magacaba ka muuqata tayada guud ee barnaamijka lagu raaxaysan karaa sida ay ku falanqaysay tayada guud ee Partition of kaarka oo laga saaray xogta fudayd.
• Waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in user celcelis ahaan u isticmaali karaa si fudud
• Barnaamijka la soo saaro si loo hubiyo in updates mustaqbalka ay sidoo kale sii free
• Waxa kaliya retrieves mid file waqti
• interface guud waa naago qalaad
Magaca & uqaabeeyaan
File xawaaraha kabashada
Disk isticmaalka Space
Guud ahaan rating
Undelete files aan
Qalab awood Mini
Kabashada Tokiwa Data
Wondershare Data Recovery Habka
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab aan laga cabsado oo keliya, laakiin sidoo kale u ogolaataa user ay u natiijada ugu wanaagsan u hesho waqti lahayn gudahood oo dhan. Interface waa in kastoo aan sida heerarka hadda laakiin horumarka la sameeyey hayo maskaxda ku qanacsan user iyo sabab la mid ah barnaamijka waxaa lagu qiimeeyay sare. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee la xiriirta soo kabashada xogta waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka uu soo halkan ku xusan waxaa la socda in ay ka buuxaan si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan ma ahan oo keliya, laakiin sidoo kale faa'iidooyin waxaa ku riyaaqay sida ay u waxay u baahan yihiin iyo waxay doonayaan.
1. version ayaa maxkamad barnaamijka lagu talinayaa in la soo bixi oo waxaa la samayn karaa adigoo raacaya link http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html
2. Bogga nooca file soo muuqan doona iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in nooca files aan la soo xulay oo keliya laakiin button soo socda ayaa waxaa sidoo kale ku sii adkeeyey,
3. Meesha waa in markaas la cayimay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta hanaanka soo kabashada guud:
4. Marka files ah ayaa la helay user u baahan yahay inuu fiiriyaa si loo hubiyo in kuwa loo baahan yahay waa la riixi ama saxday mid mid si ay u hubiyaan in ay iftiimisay. Marka la sameeyo user hadda u baahan yahay si loo hubiyo in badhanka soo kabsadaan waa riixi si aad u dhamayso ee buuxa:
Siyaabaha la taaban karo inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Computer iyo Memory Card
Tallaabooyin sahlan si ay u qabtaan soo kabashada kaadhka xusuusta DDR ah
> Resource > Memory Card > Waa kuwee ka mid ah waa soo kabashada software kaadhka xusuusta ugu fiican